Haydarpaşa Solidarity waxay ku jirtaa ficil horteeda Xarunta Tareenka ee 422 Todobaad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHaydarpaşa Solidarity waxay ku jirtaa ficil horteeda Xarunta Tareenka ee 422 Todobaad
18 / 02 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Midnimada haydarpasa waxay shaqeynaysay toddobaadyo
Saldhigga tareenka ee Haydarpaşa, oo dhismihiisa la bilaabay 1906, wuxuu shaqeeyey 19 sano kadib markii la hawl galiyay Agoosto 1908, 105. Xidhnaa tan iyo 18 Juun 2013. Si kastaba ha ahaatee Haydarpaşa Solidarity, Haydarpasa Station badbadada ee saldhigga tan Sunday February 5, 2012 ururiyey hore ee goob kasta oo isku dayaya in ay sameeyaan in codkooda la maqlo in Turkey.
Qodista qadiimiga ah waxaa lagu fuliyaa agagaarka Xarunta Haydarpaşa Station
Axadda maanta ah, waxay hor joogeen saldhigga iyaga oo wata taleefanno gacmeedkooda iyo boodhadhkooda, kuwaas oo ay ku qaylin doonaan boorarka Magaalada ee marinnada ka soo baxa idaacadda iyo tallaabooyinka 422, "Tareenka ayaa halkaan imaan doona, Xarunta Haydarpaşa waxay ahaan doontaa boosteejooyinka, Dekada Haydarpaşa waxay sii ahaan doontaa dekedda".
Si kastaba ha noqotee, ka sokow ilaalada caadiga ah ee 'Haydarpaşa waardiyaha, xaruntu way sii jiri doontaa' ', iyo' 'Huteelkastoo, matxafkii, ilaalada Haydarpaşa ama xarunta ayaa sii ahaan doonta' 'oo soo jiidata dareenka. Sababta lacagtan ayaa ahayd soo jeedintii saldhigga looga dhigayay madxafka kadib burburka xilliyadii dambe ee Roman, Byzantine iyo Ottoman markii la ogaadey intii lagu jiray qodiddii qadiimiga aheyd ee bilaabatay labo sano ka hor.
Tugay Kartal: "Waxaan gelin doonaa himilooyinka kuwa doonaya inay furaan Haydarpaşa Terminal si ay uga ganacsadaan Haydarpaşa"
Tugay Kartal, oo dhammeeyay Dugsiga Sare ee Wadada Tareenka 1977 isla markaana xubin ka ah isbahaysiga, ayaa sharraxay sababta ay uga soo horjeedaan matxafka oo ku adkaynayaan xarunta:
Waxay marmarsiinyo u sameeyeen dabka ka kacay November 28, 2010 si ay u boobaan Haydarpaşa Station, ka dib waxay cudurdaar u sameeyeen in Olombikada lagu qabto Istanbul. Hadda waxay marmarsiinyo u sameynayaan qodista qadiimiga. Haddii aan runtii ognahay inay xasaasiyad u leeyihiin dhaqanka, waxaan dhihi karnaa 'Ha Haydarpaşa Station ha noqoto matxafka qadiimiga'. Laakiin annagu daacad kama nihin kuwa daad qaaday Hasankeyf oo qallalay durdurro badan oo waddankeenna ku yaal, iyagoo leh 'Waxaan ka dhigi doonnaa Haydarpaşa matxafka qadiimiga'. Intaas ka dib, waxay rabaan inay dhistaan ​​hudheel xarunta Haydarpaşa Station, waxaa jira hammi ah inay halkan ganacsi uga furaan. Hamiyadaas waxaan ugu shubi doonnaa biyaha Haydarpaşa. Ka sokow, dabcan annagu kama soo horjeedno qulqulka taariikhiga ah. Laakiin markaa waxay dhisi karaan madxafka meel kale, waxaan dooneynaa inaan tareenka ka soo qaadano Haydarpaşa halkan. ''
Ayşen Dönmez: '' Haydarpaşa dhulku waxay waraabinaysaa qof walba afkiisa, laakiin xarunta Haydarpaşa wali waa mid lama huraan ah ''
Ayşen Dönmez, oo howlgab noqday ka dib markii uu ka shaqeynayay Xarunta Haydarpaşa Station 36 sano, ayaa qaba in tallaabada lagu soo celinayo matxafka ay tahay khiyaano.
Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha VOA Turkish, ayuu Dönmez yiri, “Haydarpaşa waxaa loo xiray tareenka magaalada ku yaal June 2013, 19. Intaa ka dib, Haydarpaşa ayaa gabi ahaanba isaga hadhay shaqo la’aan. Sababta oo ah 1 milyan oo mitir murabac ah oo ka dambeysa Haydarpaşa iyo hareeraheeda ayaa kala dhantaala qof kasta afkiisa. Awooda siyaasadeed ayaa eegaysa dekada Haydarpaşa, waxay aragtaa dhul; wuxuu eegaa saldhiga gadaashiisa wuxuuna u arkaa shirqool. Qorshayntu waxay aragtaa meel looga baahan yahay dhismaha. Wax sidaas oo kale ahi ma jiraan. Magaalo kasta oo ku yaal Yurub, saldhigyada tareenka ayaa ku yaal bartamaha magaalada. Haydarpaşa sidoo kale waa meel ku taal bartamaha magaalada. Haddii aysan jirin xarumo dhexe, ma shaqeyn kartid tareen. So funny, waxay umuuqataa sida toy. Waxaad socodsiineysaa kaliya seddex ama shan tareen. Taasi waxay la micno tahay inaysan jirin gaadiid tareen oo loogu talagalay magaalooyinka waaweyn sida Istanbul. Sababtaas darteed, maahan wax daruuri ah laakiin waa waajib in Haydarpaşa uu sii joogo. ''
Harun Gökay: "Ka dib markii buundada la dhiso, Haydarpaşa waxaa lagu xiri karaa Söğütlüçeşme"
Suurtagal ma tahay in loo isticmaalo Haydarpaşa xarun tareen kadib marki Marmaray ay biloowday howlaheedii? Sida laga soo xigtay Harun Gökay, oo hadda ka shaqeeya sidii mashiin farsameeya magaalada Marmaray, gabi ahaanba waa macquul.
Gökay, '' Waqti xaadirkan, buundo ayaa loo dhisayaa inay isku xidho Söğütlüçeşme iyo Haydarpaşa. Hagaag, waa suurtagal kadib markii buundadaas la dhisay. Intaa waxaa sii dheer, baahi weyn ayaa loo daboolay oo keliya maaha tareennada magaalada ku xeeran laakiin sidoo kale tareennada isku xidha. Bal aan tilmaamo hal qodob oo dheeri ah.
Xitaa haddii Marmaray la furay, dadka intooda badan wali waxay doorbidaan doonyaha. Marka loo eego doorbidistaas. Xiritaanka Haydarpaşa waa wax aan micno lahayn. Ka dib oo dhan, tani waa waxa Istanbulites doonayaan. Haydarpaşa waa meesha keliya ee ku taal dhinaca Anatolia halkaas oo doonta ay ka wada shaqeeyaan tareenka. ''
Tugay Kartal: "Marmaray kama shaqeynayso awood buuxda, iyadoo aysan ka jirin xarumaha Haydarpaşa iyo Sirkeci"
Xubnaha Haydarpaşa Solidarity waxay hoosta ka xariiqeen in haddii idaacadda la furo, khadadka ku teedsan ee ka baxa Bostancı ama Pendik oo soo gaari doona Söğütlüçeşme ay sidoo kale dib u soo celin doonaan isu socodkii magaalada.
Tugay Kartal, '' Haydarpaşa iyo Sirkeci ma jiri karaan xarun la'aan. Tareenka wuxuu dhex mareysaa tuubada, laakiin mashruuca Marmaray hadda ma shaqeynayo awood buuxda. Haddii mashruuca Marmaray tareenka dhulka hoostiisa mara shantii daqiiqoba, suurogal kuguma aha inaad halkaas ku gudubto tareenka. Waad ogtahay, waxay ka sameeyeen mashruuca Marmaray dusha sare iyagoo leh seddex xariiq. Laba khad oo loogu talagalay Marmaray, hal layn oo loogu talagalay tareennada waaweyn. Tuubadu waxay leedahay laba xariiq. Horaad u timid oo waa laguu xannibay sida dhalada afka. Intaa waxaa dheer, TaşımacılŞk AŞ wuxuu doonayaa inuu kordhiyo tirada tareennada, laakiin taasi ma dhicin maxaa yeelay ma jiraan askar la beddelo ama la wareejiyo tareennada. HalkalıMa jiro xarun tareen oo ku filan tareennada. Saldhigyada tareenka waa albaabka magaalooyinka. Laakiin inkasta oo aan aad u jecelnahay, ma dagaallanno tan sababta oo ah waxaan jacayl platonic u leenahay xarunta Haydarpaşa. Waxaan ogsoonahay ka dib maalgalinta badan ee mashaariicda tareenka, inaysan suurtagal ahayn in la sii wado adeeggan iyada oo aan saldhig lahayn. Sababtaas awgeed, Haydarpaşa iyo Sirkeci ma joogi karaan xaruntooda, 'ayuu yidhi.
Mustafa Duygun: '' Haydarpaşa waa xusuusteenna, matxafka ku nool '
In kasta oo Tugay Kartal leeyahay, "Uma dagaallanno tan sababta oo ah waxaan leenahay jacayl platonic ah," Mustafa Duygun, oo makaanik ahaan u shaqeynayey muddo 1977 sano ah ka dib Dugsiga Sare ee Xirfadda Railway, ayaa xusaya maalmihii uu yimid Xarunta Haydarpaşa Station.
'Waxaan imid garaashkaan marar badan. Dhammaan dadkayaga ka imanaya Anatolia waxay leeyihiin budo cagaar ah dhagaxyada marmar ee saldhiggan. Kaddib markii tareenadaasi maran yihiin, waxaan dareemaynaa murugooda. Dadku waxay leeyihiin xusuus, iyo dalal sidoo kale. Haydarpaşa waa xusuusta dhammaanteen. Waa matxaf nool. Thanksgiving-kaan, tareenada ka imanaya Anatolia waxay la kulmi doonaan qof jecel oo taga. Xarunta Haydarpaşa waa in la furo. ''Amerikaninse ah)
Midnimada Haydarpa Sola: 'Haydarpaşa iyo Saldhigga Tareenka Sirkeci oo loo wareejinayo IMM'
Ankara Gar ee hortaala Haydarpaşa Gar
Haydarpaşa Solidarity Haydarpaşa Solidarity
Haydarpasa Solidarity: 29.05.2012 Shirka Baaqa kama dambeyska ah
Haydarpaşa Solidarity Group ayaa ku guulaysatay inay Pendike ku tagto Tareen (Last)
Dibadbixii Xarunta Tareenka ee Haydarpasa horteeda baarlamaanka Yurub (Video)
Miisaaniyado ficil ah oo ka dhan ah tareenka
3. Shaqaalaha tuulada ficilka
Dugsiga Tacliinta Sare ee Tareenka